FAQs | 360 Online shopping in Myanmar
လူကြီးမင်းတို့ အလိုရှိသောအရာမှန်သမျှကို ပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်နဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာအလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ထားသော Online Shopping Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
360 Malls မှာဘာတွေရနိုင်သလဲ ?
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေး၊ လူကြီး၊ လူငယ် မရွေး အတွက် ဖက်ရှင်များကို တစ်နေရာတည်းမှ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး Brand Series များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ERKE ရဲ့ Shoes, Apparel နှင့် Accessories များကို ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။
360 Malls မှာ ဈေးဝယ်ခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရနိုင်မလဲ ?
ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ Customer များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုများကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဈေးဝယ်သူများအနေနဲ့ မိမိတို့လိုအပ်ချက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အပ်နှံသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Home Delivery Service ရှိပါသလား ? ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ ?
ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိ Order တင်ပြီးသည်အချိန်မှစ၍ ၂၄ နာရီအတွင်း မိမိမှာယူထားသောပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အချို့ နယ်ဘက်တွေဆိုရင်တော့ ၄၈ နာရီ (၂ ရက်) ခန့်ကြာတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ တောင်ကြီး၊ မော်လမြိုင်၊ မြစ်ကြီးနား၊ လာရှိုး၊ ပြည် အစရှိသော မြို့များတွင် Home Delivery Service ကိုရယူနိုင်ပြီး အခြားနယ်များကိုတော့ နီးစပ်ရာ ကားဂိတ်သို့ပို့ပေးပါတယ်။
Delivery အတွက် ငွေကြေးကောက်ခံမှုများရှိပါသလား ?
ဟုတ်ကဲ့၊ Customer Location ပေါ်မူတည်ပြီး မြို့နယ်အလိုက် ချိုသာသောဈေးနှုန်းများဖြင့် သတ်မှတ်ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ နယ်မြို့များဆိုပါက တန်ဆာခ ကျသင့်ငွေကို ပစ္စည်းရွေးချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်များကို မိမိကိုယ်တိုင်ပေးချေနိုင်သလို၊ ကျသင့်ငွေအား ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်အတူ ကြိုတင်လွဲပေးခြင်းဖြင့်လည်း ပေးချေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Quality Issue, Size Problem များကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးပါသလဲ ?
Quality Issue တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက Customer စိတ်ကျေနပ်သည်အထိ အခမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ Size Problem များကို Delivery Charges ပေးရုံဖြင့် ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
360 Malls မှာတင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းများကို အပြင်မှာထိတွေ့ကိုင်တွယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား ?
ဟုတ်ကဲ့၊ 360 Malls တွင်ရောင်းချလျက်ရှိသောပစ္စည်းများသည် အပြင်တွင် Official Showroom များဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိရာ၊ Customer များအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Official Showroom များသို့သွားရောက် ထိတွေ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
360 Malls တွင် ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အခြားမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်သလဲ ?
360 Malls တွင် နေ့ထူးရက်မြတ်၊ ပွဲတော်များအလိုက် အလွန်ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများ၊ Discount အစီစဉ်များကို ပြုလုပ်ပေးသည့်အတွက် ဈေးဝယ်သူများအနေနဲ့ Branded ပစ္စည်းများကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Customer Service အနေနဲ့ကရော ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးထားပါသလဲ ?
ဈေးဝယ်သူများ၏ အဆင်မပြေမှုများ နှင့် သိလိုသမျှများကို အချိန်မရွေး ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် Special Hotline များ စီစဉ်ပေးထားပြီး၊ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများဖြစ်ကြတဲ့ Facebook, Viber, Wechat, Instalgram, Google Plus, Twitter အစရှိသည်တို့မှ တဆင့်လည်း ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ တောင်ကြီး၊ မော်လမြိုင်၊ မြစ်ကြီးနား၊ လာရှိုး၊ ပြည် အစရှိသော မြို့များမှ Customer များအနေနဲ့ မိမိမှာယူထားသော ပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် ပေးချေရမှာဖြစ်ပြီး နယ်မှ Customer များအနေနဲ့ကတော့ မိမိပစ္စည်း၏ ကျသင့်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်အကောင့်များသို့ ဦးစွာပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့ 360 Malls မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ Order များကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ များမကြာမီတွင် ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း အစရှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Order တင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် Website ၏ အခြား Function များအသုံးပြုနည်းသိလိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ 360 Malls အနေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့အား အလွယ်ကူ၊ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းများဖြင့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Buying Gudie ကိုလေ့လာရန် (ဤနေရာသို့) သွားပါ။